Nin reer miyi ah ayaa Jubuuti u safray. – Awdalmedia
Nin reer miyi ah ayaa Jubuuti u safray.
Xilligii u Faransiisku xukumi jirey Jubuuti, ayuu nin reer miyi ahi Jubuuti u soo safray. Intii uu magaalada ka muraadsanayey, ayuu arrin magaalo-joog-xuma ah ku kacay. Dabadeedna, inta la qabtay ayaa la xidhay. Waxana lagu xukumay, xadhig saddex bilood ah.
Ninkii reer baadiyaha ayaa garan waayey waxan loo haysto ee uu biiyey! Haddaba si looga dhaadhiciyo waxa loo haysto awgeed, ayaa loo qabtay turjubaan (interpreter) soomaaliyeed oo ka dhaadhiciya dambigan loo haysto iyo xadhiggu wuxuu yahayba.
Turjubaankii ayaa u sharraxay, waxa lagu haysto iyo muddada lagu xukumayba. Markii uu arrintii fahmay ee lagu yidhi, ” Saddex bilood ayaad jeelka fadhiyaysaa oo reerkaagii kuma noqonaysid;” ayuu isaga oo yaabban turjubaankii ku yidhi, ” Walaalkay Saancadaalaha waxad ku tidhaahdaa, baylah badan baa ii taalla, riyihiina xilli xun bay dhaleen oo waaba saddex biloode; maalin keliya ma haleelayo ayuu ku yidhi ku dheh!!
Allahayoow nin aan waxba ogeyn ha cadaabin!
Wajiga 1aad Ee Shirka Maanta Afisiyooni Uga Furmay Madaxda Somaliya Oo lasoo Geba-gabeeyay.
Midowga Musharixiinta Oo War kasoo Saaraay Weerarkii Lagu Qaaday Ciidanka Dawlada.